iOS 9 dia tsy mamela ny handika ireo rindranasa ao amin'ny iTunes | Vaovao IPhone
Azo inoana fa hampidina rindranasa maimaim-poana maro ianao mandritra ny fotoana voafetra hampifandraisana azy ireo amin'ny Apple ID raha sanatria ka te haka azy ireo amin'ny ho avy ianao. Izy ireo dia rindranasa izay tsy tadiavintsika amin'izao fotoana anaovantsika azy ity ary, raha ny lojika dia tsy mila tohanan'izy ireo ao amin'ny iTunes isika. Mety indrindra, ny antsika iPhone mandika ireo rindranasa amin'ny iTunes izay tadiavintsika ary izy ireo dia eo amin'ny fitaovantsika, fa ity tsy miasa amin'ny iOS 9, zavatra hitako tamin'ny vadiko Luis Padilla.
Ny mety fandikana ireo rindranasa avy amin'ny fitaovan'ny iOS mankany amin'ny iTunes dia tsy nahomby tato ho ato ary, angamba, noho ny safidy hanery ny rindranasan'ny iOS 9, zava-baovao antsoina hoe Thinning App (mampihena ny fampiharana mavesatra) ary izany dia mahatonga, ohatra, ny iPhone 5s misintona ny kinova 4-inch fotsiny ho an'ny iPhone, tsy misintona na inona na inona avy amin'ny iPad (raha toa ka manerantany ny fampiharana) na ny sary ho an'ny iPhone 6 na iPhone 6 Plus, izay mahatonga mampihena ny lanjany farany ny fampiharana.
Tsy fantatra raha maharitra ny lesoka na raha nieritreritra karazana vahaolana i Apple, fa raha araka ny fiheverantsika azy dia toa tsy azo atao ny mamerina ny fomba fandikana ireo rindranasa ao amin'ny iTunes izay nanananay hatramin'izao. Na dia miandry vahaolana aza isika, mety tsy ho tonga, dia tsara kokoa ny mandeha any amin'ny toerana misy ny iTunes Prefers / Stores ary jereo ny boaty Applications ao amin'ny fampidinana mandeha ho azy. Hahatonga ny iTunes hisintona ireo rindranasa izay sintominay avy amin'ny iPhone, iPod na iPad, fa manome olana maromaro ho anay izany:
Hampidina ny rindranasa manontolo izahay, ka tsy ho afaka hanararaotra ny fihenan'ny lanjan'ny iOS 9 isika raha mamerina ilay fampiharana avy amin'ny kopian'ny iTunes.
Hisintona ny rindranasa rehetra izahay, ao anatin'izany ireo ampidininay hampifandray azy ireo amin'ny Apple ID. Mba hanesorana ireo rindranasa ireo avy amin'ny iTunes dia tsara kokoa ny mandamina azy ireo ho Lisitra sy araka ny daty, mba ho hitantsika ireo nampidirina farany ary azontsika esorina ireo alaina vao haingana izay tsy mahaliana antsika.
Manantena aho fa hahita vahaolana i Apple amin'ny fotoana fohy. Tena nahaliana ilay safidy ary fomba iray mora hitazomana izany dia, rehefa hitan'ny iTunes fa manana rindranasa vaovao amin'ny iPhone, iPod na iPad isika dia hampidina azy avy hatrany avy amin'ny App Store nefa tsy mila manao dingana fanampiny isika. Tsy mino aho fa tsy nieritreritra an'izany i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » iOS 9 dia tsy mamela ny handika ireo rindranasa ao amin'ny iTunes
Juan Fco Carretero (@ Juan_Fran_88) dia hoy izy:
Ny kopian'ny rindranasa amin'ny iTunes dia tsy mandeha amiko intsony hatramin'ny nivoahan'ny iOS 9.0, saingy noho ny beta 4 an'ny iOS 9.1 dia tsy mandeha koa izy io, ny beta 5 izay nivoaka androany dia tsy afaka nanandrana azy aho nefa
Valiny tamin'i Juan Fco Carretero (@ Juan_Fran_88)
Satria toy izany ny iOS9, tsy mino aho fa hihemotra izy ireo. Mba hametrahana ny rindranasa, ny zavatra tsy maintsy zahana amin'ny safidin'ny iTunes, kisary fivarotana, dia ny boaty fampiharana fa tsy ny boaty mozika araka ny voalaza ao amin'ilay lahatsoratra, izay miharihary fa misintona ireo mozika novidiana tamin'ny fitaovana. Etsy andanin'izany, ny fanavaozana dia tsy ampifanarahana ankehitriny ary tsy maintsy ataonao amin'ny tanana avy amin'ny iTunes izany.
Eny ary, diky izany. Miandry ny hahazo ireo iphone 6s aho (izao dia manana 5s aho) ary mandà ny handehanako hanamboatra azy io ho fitaovana vaovao. Alefako foana ireo kopian'ny nomaniny ho solon'izay taloha. Efa nataoko tamin'ny fanovana tamin'ny 4s ka hatramin'ny 5s. Ary te-hamindra ny apps iTunes izay backup ho an'ilay vaovao aho. Raha mametraka backup amin'ny iphone vaovao aho, dia tsy hafindra amin'ilay vaovao izy ireo? Sa oh ny backup raha toa ka mety ho izy ireo na dia tsy ampifanarahana amin'ny iTunes? Ataoko feno miaraka amin'ny iTunes ny nomaniny ho solon'izay fa tsy amin'ny iCloud ka ny atiny rehetra dia afindra amin'ny iPhone vaovao mitovy amin'ny an'ny teo aloha.
Salama, ilay bera jiosy. Tsy dia matetika no mahazo kopia toa an'io, saingy efa ela no sitrana, ary ny jailbreak dia voatahiry ao anaty kopia. Heveriko fa amin'ny kopia dia handeha ny zava-drehetra na dia tsy ao amin'ny iTunes aza.
Raha sanatria, ataovy configure aloha ny iTunes arak'izay ataoko etsy ambony, mba hametrahana ireo rindranasao amin'ny iPhone ao amin'ny Mac / PC-nao. Hamarino tsara fa hahita ny rindranasao rehetra ao amin'ny iTunes ianao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary fampiharana. Manana an'io toa io aho ary rehefa mamerina sy manary ny nomaniko nomaniny ho solon'izay dia efa copie daholo, afa-tsy ny fikirakirana ny dian-tongotra, toy ny lojika sy zavatra fanaingoana izay vita vetivety.
Ampiasaiko amin'izao fotoana izao ny iphone 5 sy 4 ahy raha nafindra any iTunes ireo apps avy amin'ny 4, fa ireo avy amin'ny 5 kosa tsy nafindra, misy mahalala ny maka tahaka azy ireo ve? na tsy miaraka amin'ny ifunbox aza dia azoko atao ny maka tahaka ny rindranasa ary ny marina dia misy fanavaozana ny lalao milanja 1 gb
G. Del Castillo dia hoy izy:
Salama, azafady manana iTunes 12.3.1.23 napetraka ho an'ny PC aho ary rehefa manasokajy ny fampiharana ao anaty lisitra aho dia tsy miseho ny sub-options handaminana azy amin'ny datin'ny fividianana, tsy haiko raha noho ny kinova vaovao na inona izany , saingy tiako ho fantatra raha fantatrao ny fomba hahitako izany toe-javatra izany, ny tena marina dia ireto iTunes ireto no mandoto iTunes bebe kokoa.
Valiny tamin'i G. Del Castillo
chacataplan dia hoy izy:
Izy io dia niasa ho ahy niaraka tamin'ny iTunes napetraka miaraka amin'ny kinova 12.1.2.27.
Mamaly an'i chacataplan